Tao anatin’ny fetin’ny Krismasy teo: Polisy iray hita faty tetsy Andrefan’Ambohijanahary | NewsMada
Tao anatin’ny fetin’ny Krismasy teo: Polisy iray hita faty tetsy Andrefan’Ambohijanahary
Tamin’ireo olona telo hita faty nandritra ny fetin’ny Krismasy teo, fantatra, araka ny tatitra avy amin’ny polisim-pirenena fa polisy ny iray. Tetsy Andrefan’Ambohijanahary no nahitana ny fatiny, ary voalaza fa hoe nisy namono izy io.
Fety tsy ialana loza! Vao ny talata maraina teo no nisy ilay zandary matin’ny jiolahy tany Ambatomanoina, izao sahady koa ity polisy iray indray no maty nisy namono. Midika izany fa tena sahy mihantsy ary tsy matahotra ny mpitandro filaminana intsony ny jiolahy. Efa mandeha ny fanadihadiana ary voamarina fa nisy namono izy nandritra ny fanaovana “autopsie” ny razana, araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny polisim-pirenena, ny Contrôleur général de police, Rakotozanany Dany Marius raha nanao tatitra fohy ny akon’ny 24 sy 25 desambra lasa teo izy. Miisa 24 kosa ireo olona nosamborina ka ny fito tamin’izy ireo tratra nangarom-paosy raha 11 tratra nangalatra, olona valo nosamborina fa mamo an-dalambe, olona roa tratra nivarotra rongony. Miisa 13 ny trangana lozam-pifamoivoizana. Nohamafisin’ity manamboninahitra ambony eo anivon’ny polisim-pirenena ity fa hamafisina ny fitandroana ny filaminana amin’ireo faritra be olona toy ny eny Analakely sy Antaninarenina. Toy izany koa ny eny amin’iny faritra 67 ha sy Ambohipo miampy ireo faritra hafa. Hisy koa ireo polisy manao fisafoana eny amin’ireny toeram-pilanonana samihafa ireny amin’ny faran’ny taona.
Lehilahy iray koa hita faty teny Ampasika, omaly. Tsy mbola fantatra mazava ny antony nahafaty azy fa ireo mpaka fasika no nahita ny fatiny natsingevan’ny rano. Tonga teny an-toerana ny teo anivon’ny sampana mpamonjy voina nampiakatra ny razana.